Ny Southwest Airlines dia tsy handroaka ny mpiasany miandry ny fanavotana vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Southwest Airlines dia tsy handroaka ny mpiasany miandry ny fanavotana vaksiny
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Southwest Airlines dia tsy handroaka ny mpiasany miandry ny fanavotana vaksiny.
Amin'ny maha-mpifanaraka federaly azy, Southwest Airlines dia efa nikasa ny hametraka ireo mpiasa tsy vita volo rehetra izay mbola tsy nahazo famotsoran-keloka na ara-pivavahana tamin'ny 8 desambra tamin'ny fialan-tsasatra tsy voaloa.
Ny memo dia manome toky ny mpiasa fa afaka manohy miasa izy ireo raha mbola tsy ankatoavina ny fanavotana azy ireo.
Raha tokony hiala tsy voaloa ny karama, dia mbola handray karama hatrany ny mpiasa ao amin'ny Southwest miandry ny fitsarana.
Raha nolavina ny fanafahana azy ireo dia afaka mangataka indray ny mpiasa raha manana vaovao na toe-javatra vaovao izy ireo.
Ny mpiasa ao amin'ny Southwest Airlines dia tsy terena haka fialan-tsasatra tsy voaloa intsony mandritra ny fangatahana fanalalahana ny mandidy ny vaksiny COVID-19.
Taorian'ny hetsi-panoherana, fandavana ary sidina nesorina nandritra ny herinandro, nivadika lalana ny zotram-piaramanidina momba ny didin'ny vaksinin'ny mpiasa ao aminy.
Southwest Airlines dia tsy hanery ny mpiasa miandry ny fanapaha-kevitra momba ny famotsoran-keloka na ara-pinoana na ara-pitsaboana ny didy famonoana vaksinina tsy maintsy aloa handoa fialan-tsasatra mandra-pahatapahan'ny fanapahan-kevitr'izy ireo, araka ny memo iray azon'ny sampam-baovao androany.
Southwest dia nanamafy ny fahamarinan'ny memo, izay manome ny mpiasa hatramin'ny 24 Novambra na vaksiny na hangataka fanavahana.
Raha tokony hiala tsy voaloa ny karama, ny mpiasa miandry ny didim-pitsarana amin'ny fanafoanana azy ireo dia hanohy handray karama ary mety hanohy hiasa aza “rehefa mandrindra [Southwest] amin'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny fepetra takiana (vaksinina na toerana azo ekena),” hoy ny naoty.
Nosoratan'ny filoha lefitra zokiolona misahana ny asa sy ny fandraisam-bahiny Steve Goldberg ary ny filoha lefitra ary tompon'andraikitra ambony Julie Weber, manome toky ny mpiasa izany fa afaka manohy miasa izy ireo raha toa ka mbola tsy nekena ny famotsoran-keloka azy ireo raha mbola manaraka ny lalàna mifehy ny masking sy manalavitra ny fiaraha-monina izy ireo, ary mampanantena fa afaka mangataka indray ny mpiasa raha toa ka holavina ny fanavotana azy ireo raha manana “vaovao na toe-javatra vaovao [tian'izy ireo] hodinihin'izy ireo.”
Ny famoahana ny memo dia tonga taorian'ny fihetsiketsehana nandritra ny andro maro tany ivelan'ny foiben'i Southwest Dallas sy ny tsaho momba ny tsy fahasalamana eo amin'ireo mpanara-maso ny fifamoivoizana sy ireo mpiasa hafa. Voatery nanafoana sidina an'arivony maro ny herinandro lasa teo tamin'ny herinandro lasa teo - maherin'ny 1,000 ny alahady fotsiny - na dia tsy nety nanaiky izay tao ambadiky ny fanafoanana aza izy ireo, amin'ny tranga maro dia manameloka ny toetrandro na eo aza ny lanitra mazava sy mazava. Ny seranam-piaramanidina dia voarohirohy tamina mpandeha tezitra satria tonga ireo mpitsangatsangana mba hahita fa nofoanana tamin'ny fomba miafina ny sidina ataon'izy ireo.
Amin'ny maha kontraktor federaly azy, Southwest Airlines talohan'izay dia nikasa ny hametraka ny mpiasa rehetra tsy voamarina izay mbola tsy nahazo fanavahana ara-pahasalamana na ara-pivavahana tamin'ny 8 desambra tamin'ny fialan-tsasatra tsy voaloa.
Tsy toy ny mpitatitra madinidinika, eo ambany fahefan'ny filoha dia tsy manana safidy mamela ny mpiasa hanaiky ny fanandramana isan-kerinandro. Hatramin'ny herinandro lasa, mpiasa 56,000 any amin'ny faritra Andrefana no mbola nahavita nitifitra.
United Airlines mpifaninana an'i Southwest dia nandray ny mandat ny vaksininy manokana tamin'ny volana aogositra, talohan'ny nanambaran'i Biden ny fanjakan'ny federaly mihitsy aza, ary sahala amin'izany koa dia nandrahona ny tsy hanaraka izy amin'ny fialan-tsasatra tsy voaloa. Saingy, ny mpitsara federaly ao Fort Worth dia nandrara vonjimaika ilay kaompaniam-pitaterana tsy handroso amin'ny sazy. 90% ny mpiasa ao amin'ny orinasa no voalaza fa vita vaksiny.
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, ireo mpiaramiasa amerikana mpiara-dia aminay American Airlines, Alaska Airlines, ary JetBlue koa dia nahazo mandat ny vaksiny federaly, satria heverina ho mpiantoka federaly izy ireo ary noho izany dia tsy afaka miala amin'ny jab.